बाढी आउनुको कारण के हो ? | allans.pl
बाढी आउनुको कारण के हो ?
Views विचार4डिसेम्बर 2021 शिक्षा र विज्ञानभूगोलिया बाढी बाढी कारणहरू रोकथाम
जिing (अतिथि)	 29 नोभेम्बर 20210प्रतिक्रियाहरु
बाढी आउनुको कारण के हो ? बाढी किन आउँछन् ? बाढी किन आउँछ ? कुनै तरिकाले बाढी रोक्न सकिन्छ? वा मानिस असहाय छ?
लुइस XV प्रश्नको उत्तर दिए4डिसेम्बर 2021
एलनहरु8.16K थपिएको: नोभेम्बर २१, २०१
कासिया11.73K	 डिसेम्बर १,, २०१। मा पोष्ट गरिएको	0प्रतिक्रियाहरु
लाई जवाफ दिनुहोस्: बाढी आउनुको कारण के हो ?
बाढीका कारणहरू समावेश छन्: जलवायु परिवर्तन, तीव्र र लामो वर्षा, द्रुत हिउँ पग्लने, अवरुद्ध र पहिरोले नदीको मार्गमा अवरोध पुर्‍याउने, पानीको बाँधको विफलता, अपर्याप्त ढल प्रणाली, अपर्याप्त बाढी संरक्षण, साथै खराब डिजाइन गरिएको प्रतिधारण प्रणाली वा यसको अभाव। बाढी, वास्तवमा, रोक्न सकिँदैन, तर तपाईले सम्भावित क्षतिहरू सीमित गर्ने सुरक्षा उपायहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै वाटरटाइट बल्कहेडहरू, बालुवाका झोलाहरू, प्लास्टिक बाढी अवरोधहरू।
कासिया प्रश्नको उत्तर दिए4डिसेम्बर 2021
लुइस XV870	 डिसेम्बर १,, २०१। मा पोष्ट गरिएको	0प्रतिक्रियाहरु
बाढी आउनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको समुदायमा शासन गर्ने निकायको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
पहिलो, जब त्यहाँ धेरै वनस्पति छ, सम्भावना धेरै कम छ। तर पाँच वर्षअघिको शासनकालदेखि पोल्याण्डको तेस्रो गणतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा बढी रुख काटिएका छन् ।
उपयुक्त बाढी सुरक्षा प्रणालीमा पनि लगानी आवश्यक छ - कृत्रिम पानी जलाशय, नदी ड्रेजिङ, बाढी तटबन्धको हेरचाह, राम्रो ढल प्रणाली, माथि वर्णन गरिए अनुसार।
पोल्याण्डमा मात्र होइन - जर्मनीमा पनि यससँग समस्याहरू छन्, जुन हालै व्यापक रूपमा छलफल गरिएको छ। पहिले नै पुरातन इजिप्टमा, आजको पोल्याण्डमा भन्दा पानी राम्रोसँग व्यवस्थित गरिएको थियो।
(2 भोट, औसत: 5,00 ))
समान प्रविष्टिहरू हेर्नुहोस् बाढी आउनुको कारण के हो ?
571196192 (571 196 192) - कसले बोलायो?
Balearic द्वीपसमूह मा सबैभन्दा ठूलो टापु
उज्बेकिस्तानमा उत्खनन अपरेटरले कति कमाउँछ? उत्खनन व्यवसायीहरुको तलब...
एक वास्तुकारले कति कमाउँछ? वास्तुकारको तलब के हो?
ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो ताल
२२226077500० (२२ 22 607 75 00 ०) - यो कसको फोन नम्बर हो?
बच्चाहरूको लागि आकर्षण - Łódzkie voivodeship
धागा हो बाढी आउनुको कारण के हो ? के यसले तपाइँ, तपाइँको कम्पनी, प्रजनन, उत्पादन वा तपाइँको कुनै अन्य प्रयासलाई चिन्ता गर्दछ?
Pesel नम्बर प्रदान गर्न खतरनाक छ?
413367966 (41 336 79 66) - कसले बोलायो?